ဗီယက်နမ်သို့သွားရန် - ဤအခြေခံနှင့်လိုအပ်သောအကြံပြုချက်များကိုရေးချပါ ခရီးသွားသတင်း
မင်းစဉ်းစားဖူးတယ် ဗီယက်နမ်ကိုသွားပါ? သို့ဖြစ်လျှင်သင်အားဗီဇာ (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကာကွယ်ဆေးနှင့်အခြားသူများစွာတို့ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများနှင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားစိုးရိမ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမလိုဘဲသင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးစဉ်ကိုခံစားနိုင်စေရန်အတွက်အခြေခံကျသောအချက်များနှင့်မတူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထုပ်ပိုးသောအခါသွားသောအခါသံသယများတတ်သည် ကမ္ဘာ၏အခြားဘက်ခြမ်း။ အကောင်းဆုံးအရာကအရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားဖို့၊ စွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုမစတင်မီချည်ထားခြင်းကိုထားရန်ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာ၏ဆန္ဒဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မအံ့သြပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလိုပါသလား?
၎င်းသည်မကြာခဏသံသယများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၌ရှိလျှင်သတိရပါ စပိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြီးတော့အဲဒီနိုင်ငံမှာ ၁၅ ရက်ထက်နည်းမယ်ဆိုရင်သင်မလိုအပ်ပါဘူး ဗီဇာဗီဇာလျှောက်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်ဖော်ပြခဲ့သောဤနေ့ရက်များထက်ကျော်လွန်ပါကသင်၌ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်လေယာဉ်ကွင်းနှင့်အခြားနယ်နိမိတ်အမျိုးအစားများအတွက်သက်တမ်းတစ်လရှိသည့်တစ်လတည်းခိုရန်သတ်မှတ်ထားပြီးကျန်တစ်ခုမှာသုံးလနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်လေဆိပ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
တိုင်းပြည်တစ်ခုစီ၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲသတိရရမည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်မရနိုင်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရှိဗီယက်နမ်သံရုံး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာဂျင်တီးနားအတွက်ဗီဇာရယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အီတလီလူမျိုး ဟုတ်ကဲ့၊ စပိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူတူပင်သင့်ကိုကြိုဆိုပြီးဗီဇာမပါဘဲ ၁၅ ရက်ကြာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်ကို သိ၍ အခြေခံလိုအပ်ချက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး ၆ လသက်တမ်းရှိသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။ သံရုံးမှဖြည့်စွက်သည့်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်စွက်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံကိုပေးပို့ပါမည်။ သင်သည်နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုတွင်ကြိုတင်မှာကြားရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကဗီယက်နမ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
သင့်မှာဗီဇာရှိပြီးသားဆိုရင်လိုအပ်ရင်ခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုတာသင်သိထားသင့်တယ် မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုး။ သို့သော်မကြာခဏဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့အချို့သောအကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ ယင်းတို့တွင်အဝါရောင်အဖျား (သို့) အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) အပြင် B နှင့်အူရောင်ငန်းဖျားအဖျားရောဂါများပါ ၀ င်သည်။ ခြင်ဆေးကိုအမြဲတမ်းအလွန်လိုအပ်သည်၊ လိုအပ်ပါက ibuprofen နှင့်အတူကိရိယာအစုံအလင်သယ်ဆောင်လာသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ အရာအားလုံးသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တည်ရှိပြီးဖြစ်သည် ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို process ဘယ်မှာမှဝဘ်စာမျက်နှာများ။ ဒီဂျစ်တယ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီ။ ၎င်းတို့ထဲ၌သင်သည်သင်၏ဒေတာများကိုရေးပြီးလိုအပ်သောငွေပမာဏကိုပေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်မီအောင်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ အကယ်၍ သင်ဟာနိုင်ငံအတွင်းတစ်လကျော်နေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်သံရုံးကိုသွားရပါလိမ့်မယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်အချို့အချက်များသည်ခရီးမထွက်မီအမြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ဗီယက်နမ်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များ နှင့်အခြား, ခရီးသွားအာမခံထုတ်ယူရန်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာဖြစ်ပျက်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်နိုင်တာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမသိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာစဉ်းစားနိုင်သည့်အတိုင်းကမ္ဘာ့အချို့ဒေသများတွင်ဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးပြtheနာသည်အတော်လေးစျေးကြီးသည်။ ငါတို့ကအဲဒီလိုစွန့်စားတာပေါ့။ အကောင်းဆုံးအရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာခရီးဆောင်အိတ်များနဲ့လေ့ကျင့်ခံရတာအမှန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကျုပ်တို့ကိုကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကတော့ဗီယက်နမ်ခရီးစဉ်ကပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။ အဖြစ် သေတ္တာများကိုသယ်ဆောင်ရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ ၎င်း၏လမ်းများအတွက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအရာအားလုံးဟာခရီးသွားတွေရဲ့အရသာကိုအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။
၎င်း၏ငွေကြေးကို dong ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုယူရိုတစ်ဒေါ်လာဟာ ၂၇၀၀၀ တန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်၌ငွေတောင်းခံလွှာများစွာရှိနေသော်လည်းသင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းပြောင်းလဲမှုသည်တတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်တွေ့ရမယ့်ဆိုင်များစွာမှာယူရိုတစ်ဒေါ်လာလောက်ပဲစားနိုင်တယ်။ ဒါဆိုဗီယက်နမ်ခရီးကိုသင်ချွေတာနိုင်ပြီ ပြောင်းလဲမှုကိုစဉ်းစားရန်ခက်ခဲသည်ဆိုပါကမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ။ ဗီယက်နမ်သို့သွားရန်နှင့်အခြားလက္ခဏာများကိုရှင်းလင်းရန်ဗီဇာရှိပါသလား။ ထိုအခါကောင်းစွာခံထိုက်သောအားလပ်ရက်ကိုခံစားရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » အကယ်၍ သင်သည်ဗီဇာဖြင့်သို့မဟုတ်ဗီဇာမပါဘဲဗီယက်နမ်သို့သွားမည်ဆိုပါကဤအကြံပြုချက်များကိုချရေးပါ
မော်ရိုကိုရှိ Casablanca မှတဆင့်လမ်းလျှောက်